खुशी किन्न बिदेशिन बाध्य नेपालीको कथा “बस है पियारी” सार्वजनिक - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
सफल न्युज द्वारा २०७८ आश्विन २६ गते मंगलवार १७:०७ मा प्रकाशित
पोखरा, २६ असोज ।खुशी किनेर पाईन्छ ? शायद पाईदैन ।तर खुशी किन्ने वहानामा वर्षेनी थुपै्र नेपाली युवाहरु विदेशिन्छन् । थुप्र्रै बाध्यताहरुले नेपाली युवालाई विदेशिन बाध्य पार्छ । विदेश जाने प्रत्येक युवाहरुको आफ्नै कथा छ, व्यथा छ अनि बाध्यता छ ।